Famehezana ny Tontolon’ny Blaogy Poloney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2018 5:04 GMT
Miaraka amin'ny anarana efa ho 20.000 ( sy mihoatra) nampiana ho ao anatina fanangonan-tsonia dizitaly manohitra ilay volavolan-dalàna DRM feno feneriterena (Fitantanana ny Zo Ara-dizitaly) ao amin'ny parlemanta Poloney, dia mitatitra ny Poland IP news and resources fa:
Noho ny kiana mavesatra avy amin'ny hevi-bahoaka, nanaisotra ny sasany tamin'ireo andalana voatsikera betsaka indrindra ny Minisitry ny Kolontsaina (indrindra fa ny fanovàna ny fehezan-dalàna famaizana) fa mbola tsy dia mazava loatra ny toe-draharaha – tsy mbola misy dika ofisialiny ilay lahatsoratra.
Fandresena kely, sy tsy maharitra ho an'ireo ‘mpikatroka amin'ny ‘click” anefa raha araka ny Poland IP, izany no porofo toy ny fomba ara-drariny hanehoana hevitra sy hikarakarana ny fanoheran'ny vahoaka no fahitàn'ny vondrona mpitsikera ao Polonina ny aterineto.
Fa tsy izany irery ihany… ny fikatrohana amin'ny aterineto, na ny fikatrohana amin'ny ‘click’, dia miseho amin'ny fomba maro isankarazana tamin'ity volana ity. Mampifangaro ny totozy sy fakantsarin'ny solosaina, Fotosia, dia manapotsitra miaraka ny fampisehoana sary mahavariana iray (jereo ny the beatroot, boo,sy P3) izay im-betsaka nalefa bilaogy ary mikasika ilay Matso vao haingana nitaky ny Fitoviana ao Varsovia. Manomboka, angamba, amin'ireo mpandray anjara (‘mahery fo‘?) tamin'ilay matso, ireo mpandray anjara mpanohitra (ireo olon-dratsy – miakanjo mainty mihitsy aza izy ireo!), ary miafara amina fampisehoana ny fahefam-panjakana tsy misy fotony (fomba fijery maneho ny fifandroritan-kevitr'ilay mpakasary avy amin'ny fanjakana?), maka sary ilay matso i Photosia.
Ary mba tsy hitoratorahana ny matso Poloney an'iza na iza…fa tena eo am-pandehanana soa aman-tsara ny Fiadiana ho Tompon-daka Eran-tany ary mety efa tafody an-trano ny ekipàna baolina kitra poloney ( ataoko fa mialohan'ny mpankafy maro). Manome sary vitsivitsy mahaliana mikasika ilay lalao Polonina-Alemana (0-1) i Polska＊ポーランド＊ Poland, nalefa fahitalavitra tao afovoan-tanànan'i Varsovia. Manampy trotraka aminà fisainana mankarary fo vitsivitsy taorian'ny lalao sasantsasany mankarary fo i P3; raha toa ka mahita mpisolo vaika ny ankalana (na vahaolana ara-drariny?) tamin'ilay faharesana tamin'ny minitra farany nanjo an'i Polonina. Tao amin'ny sehatra fanehoankevitra, miaro ilay poloney mpanazatra ny olona tsy fantatra anarana iray:
“‘… Tokony roahana i Janas saingy misy azo marina ihany ny heviny sasany.. na izany aza mba mariho fa TSY FOTOANAN'NY mpanazatra mampianatra ny mpilalao ny fomba filalaovana izao. Samy milalao ao amin'ny ligy misy azy avy ny mpilalao tsirairay ao Eoropa na any an-tranony ary tao anatin'ny 3 herinandro niarahan'i Janas tamin'izy ireo dia tsy nisy zavatra afaka novainy.”
Eo am-panohizana ny fitadiavana mpisolo vaika ny ankalana, amin'ity indray mitoraka ity ao amin'ny sehatry ny fisorohana ny heloka bevava, mamelabelatra lohahevitra miteraka adihevitra iray natolotry ny Freakonomist, Steven Levitt sy Dubner, ny beatroot. Ny tolokevitra natao tao anatin'ilay lahatsoratra, hoe mety hampihena ny tahan'ny fanaovana helokabevava ao Polonina ny famerenana ho ara-dalàna indray ny fanalàna zaza, dia tsy voatery avy amin'ny beatroot saingy niteraka adihevitra mivaivay tao amin'ny sehatra fanehoankevitra izany.
Izay no vaovao farany avy amin'ny tontolon'ny blaogy Poloney! Mandra-pihaona indray- Do widzenia y po widzenia!